निकुञ्जमाथि चापैचाप – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७२ बैशाख ८, मंगलवार ०१:४० गते
चितवन निकुञ्ज देशकै गहना हो, चितवनवासीले गर्व गर्ने ठाउँ हो । यो निकुञ्जले देशविदेशमा चितवनलाई चिनाएको छ । संरक्षणमा राम्रो काम गरेको भनेर विश्वले हाम्रो प्रशंसा गरेको छ । तर, केही दिनयता निरन्तर आइरहेका खबरहरुले निकुञ्जको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न खडा हुने अवस्था देखा परेको छ । चोरीसिकारीहरुको बढ्दो सक्रियता घट्दै गएका कारण केही राहत पुगे पनि पछिल्लो समयमा नौला खालका समस्याले निकुञ्जमाथि चुनौती थपिएको छ । समस्याहरु स्थानीय तहबाट पनि सिर्जित भएका छन्, अनि नीति निर्माताहरुका कारण पनि निकुञ्जमाथि खतरा मडारिने सम्भावना बढ्न थालेको छ ।
चोरीसिकारमात्रै निकुञ्जको समस्या रहेन अब; प्राकृतिक प्रतिकूलता, मौसमको मार र मिचाहा प्रजातिजस्ता नयाँ समस्याभन्दा पनि अरु ठूला खालका चुनौतीहरु खडा भएका छन्, यतिबेला । त्यो हो, हाम्रा आवश्यकताका लागि निकुञ्जको उपयोग । निकुञ्जभित्रका स्रोतहरु उपयोग गर्न नपाइने कानुन छ, नेपालमा । निश्चित अवधिका लागि खुलेको समयमा निकुञ्जबाट खरखडाई ल्याउन पाइन्छ । लाइसेन्स लिएर निश्चित समय र क्षेत्रमा माछा मार्न पाइन्छ । त्योबाहेकका वस्तुहरु झिक्दा कानुनी कारबाही हुन्छ ।
कानुनले यस्तो व्यवस्था गरे पनि निकुञ्जमा चाप बढेको बढ्यै छ । निकुञ्जवरपर बस्तीमा घरहरु बन्नेक्रम निरन्तर जारी छ । निकुञ्जले छोएको क्षेत्रमा गाविसभन्दा नगरपालिकाका वडाहरु धेरै भएका छन् । निकुञ्जनजिक नगर बढ्दा र बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा कुनै काम नगर्दा निकुञ्चले वरपर बस्ने मानवहरुको चाप खेप्नुपर्ने हुन्छ, सहनु पर्ने हुन्छ । ती मान्छेहरु प्रत्यक्ष निकुञ्जमा पसेर समस्या नल्याऊलान्, तर उनीहरुको चाहनालाई सम्बोधन गर्दा निकुञ्जको जैविक विविधतालाई रक्षा गर्ने कुराको ख्याल नआउन सक्छ ।
अघिल्लो महिना बछौलीको मृगकुञ्ज मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको बैठकका बेला भएको एउटा घटना चर्चामा आयो । मध्यवर्तीको माइन्युट च्यातियो रे । निकुञ्जको सुरक्षाका लागि खट्ने नेपाली सेनाको गणका कर्नेलले त्यो काम गरेको भनेर विज्ञप्तिसमेत निक्लियो । सो मध्यवर्तीका बासिन्दाले निकुञ्जभित्र घाँस काट्नका लागि गरेको मागका सम्बन्धमा छलफल र निर्णय हुँदा अवस्था तनावपूर्ण भएको रहेछ । अर्थात्, निकुञ्जमा चाप पर्ने विषयका कारण अवस्था तनावमा रुपान्तरित भएको रहेछ भन्ने देखिन्छ ।
यस्ता खालका समस्या एक होइन अनेक छन् । निकुञ्जमा संरक्षणसँगै फस्टाएको क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । पर्यटनका कारण निकुञ्जमा पुग्ने चापको कतै चर्चा हुँदैन । वन्यजन्तुमा आधारित पर्यटन संवेदनशील हुन्छ । पर्यटक पनि त्यहीअनुरुपका हुनुपर्छ, अनि पर्यटकीय संरचना र पर्यटन कार्यक्रम पनि त्यस्तै हुनुपर्छ, जसले संरक्षण र जैविक विविधतामा बाधा नपु¥याओस् । तर, यसतर्फ ध्यान कसैले दिएको छैन । निकुञ्जछेउमा दिनदिनै होटलहरुको सहर बसेको छ । पर्यटकहरुको भीड बढेको बढ्यै छ । पर्यटक पनि यस्ता छन्, जसलाई निकुञ्ज र वन्यजन्तुको संवेदनशीलताको कुनै मतलब छैन । यो खालको चापमा कसैको आँखा पुगेको छैन । यसलाई व्यवस्थित बनाउन कसैले खोजेको छैन । संख्या बढ्यो र संरचनाहरु बने थपिए भनेर रमाउने अनि सन्तोष मान्नेहरु मात्रै छन् यहाँ ।
निकुञ्जबाहिर बस्ने र बाहिर बनेका कारणहरुले निम्त्याउने वा निम्त्याउन सक्ने समस्याका अलावा निकुञ्जभित्रै पुगेर फडानी गर्नेसम्मका कामहरु हुन थालेका
छन् । त्यो काम सरकारको उपल्लो निकायबाट हुन थालेको छ । पूर्वाधार विस्तारका लागि निकुञ्ज क्षतविक्षत बनाइँदै छ ।
निकुञ्जभित्र रेलमार्ग, द्रुतमार्ग र स्थानीय सरोकारका मार्ग गरेर छवटा मार्ग निर्माणको प्रस्ताव भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका प्रमुख कमलजंग कुँवर बताउँछन् । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि निकुञ्ज क्षेत्र रोजिएको छ । भारत र चीन जोड्ने छोटो नाका ठोरी–केरूङ मार्ग पनि निकुञ्ज भएरै जान्छ । जिल्ला विकास समितिले प्रस्तावित गरेका स्थानीय तहका अन्य सडकले पनि निकुञ्जलाई चिर्ने छ ।
कमलजंग कुँवरको चिन्ता छ– रेलमार्ग बनाउँदा र रेल चलाउँदा आधा निकुञ्ज सखाप
हुन्छ । रेलले धेरै जनावरको हत्या गर्ने चिन्ता छ, उनलाई । रेल दौडने जंगलमा भारतभरमा पनि साना–ठूला जनावरहरु मर्ने गर्छन् । निकुञ्जबाहिरबाट लैजाने विकल्प हुँदाहुँदै पनि पर्यावरण, संरक्षण र जैविक विविधताको दृष्टिले अति मह¤वपूर्ण चितवन निकुञ्जभित्रै पस्ने सरकारको चाहनालाई संरक्षणकर्मीहरुले रूचाएका छैनन् । तर, यस्ता लहडी योजनाहरुका विरूद्ध आवाज उठ्न सकेको भने छैन ।
वनजंगल, जीवजनावर, खोलानालाहरु यसो हेर्दा मान्छेभन्दा परका कुरा लाग्छन् । मान्छेको संरक्षण र चिन्ताभन्दा अरु सोच्न पर्दैन भन्ने ठान्नेहरु पनि छन्, हाम्रो समाजमा । तर, पर्यावरणमा यी त¤वहरु नभए मानव समाजको अस्तित्व नै रहँदैन । हामी भने यसैको क्षयीकरणमा बढीभन्दा बढी क्रियाशील छौँ । अर्कोतर्फ, निकुञ्जमाथि बाहिरमात्रै होइन भित्रै पनि चाप बढेको छ । निकुञ्जको क्षेत्रफल उही हो, त्यो थपिनेभन्दा पनि अतिक्रमण हुने खतरा बढी
छ । केही वर्षयता संरक्षणमा सर्वसाधारण जुट्दा र चोरीसिकार ठप्प हुँदा जंगली जनावरहरुको संख्यामा सुखद वृद्धि भएको छ ।
जनावर बढ्दा त्यसको चाप निकुञ्जले थेग्न सक्दैन र गाउँबस्तीमा जनावरहरु आउन थाल्छन् । जंगली जनावरहरु गाउँ आउँदा आक्रमणमा पर्छन् । मान्छे पनि घाइते हुने वा मर्न सक्छन् भने जनावरहरुले पनि यस्तै खालका जोखिम बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । यसले संरक्षणमा नकारात्मक असर
पार्छ । यस्ता खाले चुनौतीहरुको पहिचान गरेर निकुञ्जले व्यवस्थापनका नीति र योजना बनाउन आवश्यक छ । निकुञ्जभित्र पूर्वाधार लैजाने सोच संरक्षणका लागि घातक हो । विकल्प हुँदाहुँदै पनि निकुञ्ज पस्ने सोच खतरनाक हो । यसका विरूद्ध समुदाय पनि चनाखो हुनुपर्छ । समुदायलाई जागरूक बनाउन निकुञ्ज प्रशासनले तत्परता देखाउन सक्नुपर्छ ।
संरक्षणको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ के हो ? त्यस्ता लाभमा समुदायको हिस्सा के–कसरी पुगेको छ ? जस्ता विषय प्रस्ट रुपमा राख्न सकेमात्रै स्थानीयहरु संरक्षणका लागि संवेदशील बन्न सक्छन् । संरक्षणको लाभमा स्थानीयलाई सहभागी, नभए हिस्सेदार नबनाए संरक्षणको एकोहोरो कुराले मात्रै उनीहरुलाई जागरूक बनाउँदैन । यस्ता विषयमा पनि प्रशासनिक निकायको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ । निकुञ्जभित्र चाप छ, यो चाप अझै बढ्ने सम्भावना प्रबल छ । तर, त्यसको व्यवस्थापनमा चाप कम पर्ने पक्षमा चाहिँदो ढंगले कोही लागेको छैन, मूल चिन्ताको विषय नै यही हो ।